अमेरिकामा नेपालीमूलको सांसद भएर मैले के गरें? – Dcnepal
अमेरिकामा नेपालीमूलको सांसद भएर मैले के गरें?
प्रकाशित : २०७८ पुष १७ गते ७:५१
जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, अर्थात् जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्ग भन्दापनि महान हुन्छन्। यो वाणी हो, भगवान श्रीरामको। हामी यही वाणी सुन्दै पढ्दै हुर्के–बढेका हौं।
नेपाल हाम्रो मातृभूमि हो। हाम्रालागि नेपाल स्वर्ग भन्दापनि महान छ। आमा र मातृभूमि साटिने कुरा पनि हैनन्। र, संसारमा यी दुईको विकल्प पनि हुदैन। त्यसैले यी दुईसँग केहीको पनि तुलना हुन सक्दैन र गरिनु पनि हुँदैन।
अहिले संसार भूमण्डलीयकरणको युगमा छ। भौगोलिक सीमाहरू पासपोर्ट र भिसामा सीमित भएका छन्। मानिसहरू सूचना प्रविधिको राजमार्गमा बिना रोकटोक संसारभर विचरण गरिरहेका छन्।
यो आजको कुरा भयो। तर, हाम्रा स्वप्नदर्शी पुर्खाहरू त सुरूदेखि नै वसुधैव कुटूम्बकम् अर्थात विश्व नै एक परिवार हो भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्थे। उनीहरूका सन्तति हामी प्रकारान्तरमा त्यही मान्यतालाई पछ्याएर संसारभर पुगेका छौं।
हामी संसारभर पुग्नु भनेको नेपाल छोड्नु हैन, आफैंभित्र एउटा मिनी नेपाल लिएर नेपाललाई संसारभर पुर्याउनु हो। यसले नेपाल र नेपालीको परिचय बिस्तारित गर्छ र आवश्यक पर्दा आफ्नो मातृभूमिको लागि स्रोतको जोहो पनि गर्छ। विश्वमा जो यसरी फैलिए, तिनीहरूको मातृभूमिले विस्तारित परिचयमात्र पाएको छैन, विकासका लागि अतिरिक्त स्रोत र साधनको जोहो पनि गरेको छ। त्यसका लागि टाढा जानै पर्दैन, छिमेकी भारत र विश्वभर फैलिएका भारतीयहरूलाई हेरे पुग्छ।
हामी नेपाली पनि पछिल्लो समय नेपाल बोकेर संसारभर फैलिरहेका छौं। तपाईंहरू जस्तै म पनितिनै आमनेपाली मध्येको एक हुँ जसले आज आफ्नो परिचय नेपाली–अमेरिकनका रूपमा बिस्तारित गरेको छ। अमेरिकामा कसैले पनि आफ्नो पहिचान छोड्नु पर्दैन, विस्तारित हुने हो।
जनवरी ५ मा एक भर्चुअल फण्ड राइजइभेन्ट पनि आयोजना गरिएको छ। मेरिल्याण्ड राज्यको हाउस अफ डेलिगेट्सकी सभामुख एड्रिन ए जोन्सको प्रमुख आतिथ्यमा हुने उक्त इभेन्टको सफलता तपाईं हामी नेपाली-अमेरिकनको प्रतिष्ठाको विषय पनि हो। म यहाँहरू सबैलाई इभेन्टमा उपस्थित भएर विचार विमर्शमा सहभागी हुन सविनय अनुरोध गर्दछु।
जस्तो कि, तपाईं हामी पहिला नेपाली थियौं, अहिले नेपाली अमेरिकन भएका छौं। अमेरिकामा मूल कहिलै छोडिँदैन, पुस्तौपुस्तापनि यो कायम रहन्छ। अमेरिकाको सुन्दरता भनेकै यही हो। यदि यो सुन्दरता नभएको भए म अमेरिकामा बस्ने पनि थिइँन।
म यो मान्यतामा सुरूदेखि नै विश्वास गर्थे र यस मान्यताको पैरवी पनि गर्दै आएँ। भनिन्छ नि परिवर्तन आफैंदेखि सुरू गर्नुपर्छ। यस मान्यताको सुरूवात पनि मैले आफैंबाट गरें। भनाइ नै छ, रोमपुगेपछि रोमन जस्तै हुनुपर्छ। अमेरिका आएर नेपाली-अमेरिकी भएपछि हाम्रा सन्ततिहरू पनि अमेरिकी जस्तै हुनुपर्छ।
यहाँ आरक्षण हुँदैन, सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धा पारदर्शी र शुद्ध हुने भएकाले क्षमता भएकाहरू सफल हुन्छन्। हो, प्रतिस्पर्धामा हार पनि हुन सक्छ तर प्रयास जारी राख्ने अनि आवश्यकताको सही पहिचान र प्रवन्धन गर्ने हो भने सफलता निश्चित हुन्छ। अपवाद हुन सक्छ तर अपवादको सामान्यीकरण गरिनु हुँदैन।
अमेरिकी हुनु भनेको यो देशका हरेक क्षेत्रमा कुनै न कुनै स्तरको सहभागिता जनाउनु हो। देश चलाउन अनेकौं नीतिहरू चाहिन्छन्। तिनै नीतिहरूको राजा हो राजनीति। देशको मूल नीति भएकाले राजनीतिमा सहभागी नभई पूर्ण सहभागिताको अर्थ हुँदैन।
यो यथार्थ हो कि आम मानिस अमेरिकामा पैसा नै कमाउन चाहन्छ। तर, राजनीति पैसा कमाइने काम हैन। त्यसैले यो धेरैको चाहनामा पर्दैन र सजिलो पनि छैन। पहिलो त हामीसँग भाषाको समस्या हुन्छ, भाषा आए पनि एक्सेन्टको समस्या हुन्छ। यी दुबै ठीक पार्न सक्यो हामी अल्पसंख्यक भएकाले हाम्रो संख्या पनि समस्या हुन पुग्छ। यही मेसोमा कहिलेकाँही हाम्रो शरीरको वर्ण र कपालको रङ पनि समस्या भैदिन्छ ।
यी सबै कुराहरू ठीक पारे पनि चुरो कुरो त बाँकी नै रहन्छ। त्यो के भने, अमेरिकामा राजनीति गर्नु भनेको चुनावमा उम्मेद्वार भएर निर्वाचित सार्वजनिक ओहोदामा पुग्नु हो। त्यसका लागि पहिला त नीति बुझ्नुपर्छ। सम्बन्धित क्षेत्रको यथेष्ट ज्ञान भएका र विशिष्ट योग्यता भएका मानिस नै यस क्षेत्रमा आउने भएकाले प्रतिस्पर्धा चर्को हुन्छ।
अमेरिकामा पार्टी गौढ र जनता सार्वभौम हुन्छ। हरेक उम्मेद्वारले अन्तरपार्टी चुनाव अर्थात् प्राइमरी चुनाव लड्नु पर्छ। अमेरिकी लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो।
अमेरिकामा चुनाव ज्यादै महंगो छ। लामो समयसम्म चुनावी क्याम्पेन चलाउनु पर्ने हुन्छ।
लाखौं मतदाताका लागि प्रचार सामग्री तयार गर्नुपर्छ, हरेक मतदाताको घरको ढोका ढकढकाउँदै प्रचार सामग्री पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र्यालीहरू आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ, हजारौं स्वयंसेवकहरू परिचालित गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रभावकारी चुनावी क्याम्पेन सञ्चालन गर्न विशेषज्ञता हासिल गरेका क्याम्पेन म्यानेजरलगायतका स्टाफहरू अनुबन्ध गर्नुपर्छ।
अमेरिकामा चुनावका लागि खर्च जुटाउने भनेको फण्ड राइज गरेर नै हो। बहुसंख्यक कित्तामा रहेका र यथेष्ट पहुँच भएकाका लागि फण्ड राइज सजिलो हुन्छ। तर, चन्दाको सीमा तोकिएकाले उनीहरू पनि आममानिसम्म पुग्नैपर्छ। त्यसका लागि धेरैभन्दा धेरै मानिसबाट थोरै थोरै सहयोग लिने ग्रास रूट मुभमेन्ट चलाइन्छ। पछिल्लो समय अमेरिकाको खासगरी डेमोक्रेट कित्तामा यो विधि लोकप्रिय रहेको छ।
एक हैन अनेक सफलताका कथाहरू लेख्न तयार हुनुपर्छ। र, ती सबैमा तपाईं हामी देखिनु पर्छ भेटिनुपर्छ। क्यालिफोर्नियाको नेपालीलाई पीडा हुँदा भर्जिनियाको नेपालीलाई दुख्नुपर्छ। मेरिल्याण्डको नेपालीको उपलव्धीमा न्युयोर्कको नेपाली खुशी हुन सक्नुपर्छ। हामीले बिर्सनु हुँदैन, कोरोना कहरका बेला न्युयोर्कका नेपालीमा बज्रपात पर्दा टेक्सासलगायतका नेपालीले औषधि पठाएर त्यही नेपालीपनको, नेपालीमनको परिचय दिएको वास्तविकता।
यस्तो मूभमेन्ट खासगरी अल्पसंख्यक समुदायका उम्मेद्वारहरूले आफ्नो समूदायमा चलाउँछन्। जुन उम्मेद्वारले आफ्नो समूदायमा यस्तो मुभमेन्ट सफलता पूर्वक चलाउन सक्छ, उसलाई लोकप्रिय उम्मेद्वार मानिन्छ र सम्भावित विजेताका रूपमा हेरिन्छ।
म मेरिल्याण्ड राज्यको डिस्ट्रिक्ट ८ मा बस्छु। २०१९ मा यही क्षेत्रबाट डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट डेलिगेटमा निर्वाचित भएको हुँ। आप्रवासीहरू कम रहेको यो क्षेत्र मेरिल्याण्ड राज्यकै सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी क्षेत्र हो। यहाँ एसियन प्यासिफिक आइजल्याण्डर भनेर चिनिने एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका ३० देशबाट आएका आप्रवासीको संख्या ६ प्रतिशतमात्र छ। जब यतिका देशका आप्रवासीको संख्या नै यतिकम छ भने नेपाली समुदायको संख्या त स्वभावतःन्यूनहुने नै भयो।
यस्तो प्रतिकुल डेमोग्राफीका बाबजुदपनि सन् २०१९ मा रिपब्लिकन पार्टीबाट १२ वर्षसम्म डेलिगेट रहेका प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गरेर यो दुर्लभ सफलता हासिल भएको हो। यसबाट अमेरिकामा रहेका तपाईं हामी नेपालीको पक्षमा एउटा गौरवशाली इतिहासको निर्माण भयो।
पहिलो कार्यकालको अधिकांश समय कोरोना कहरमा बितेपनि केही सिक्ने अवसर मिल्यो, केही गर्न सकियो। र, आज एक नेपाली-अमेरिकन डेलिगेटका रूपमा आफ्नो समुदायलाई सबैले देख्ने र अनुभव गर्ने गरी प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छु। यो आफैंमा एक मानक उपलव्धी हो।
● नेपाली र एशियाली समुदाय केन्द्रका लागि लाखौं डलर विनियोजन
● दशैं विधेयकमाथि राज्य संसदमा वहस
● कोभिड–१९को १५ लाख खोप र अन्य सामग्री नेपाल पठाउन भूमिका
● नेपाली समुदायका हरेक दुःख–सुखमा साथ र सहयोग
जे होस् केही काम भएका छन्, केही सुरू गरिएका छन् र अरू धेरै गर्न बाँकी छन्। ती तमाम कामलाई निरन्तरता दिँदै थप उपलव्धी हासिल गर्न मैले दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेद्वारी घोषणा गरेको छु।
यस क्रममा मैले डेमोक्रेटिक पार्टीभित्रै प्राइमरी चुनाव लडेर जित्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सन् २०२२ को नोभेम्बर ८ मा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेद्वारसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यो प्रतिस्पर्धा जित्नका लागि योजनावद्ध ढंगले लामो चुनावी क्याम्पेन सञ्चालन गर्नुपर्ने छ।
त्यहीक्रममा अहिले म प्रारम्भिक क्याम्पेन सञ्चालन गरिरहेको छु। यही जनवरी १० मा हाउस सुरू हुँदैछ। म डेलिगेट भएकाले हाउस चलेको समयमा फण्ड राइज गर्न कानुनतः मिल्दैन। त्यसैले त्यस अगाडि नै उम्मेद्वारीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाइ राख्न निश्चित सहयोग जुटाइ सक्नुपर्ने हुन्छ।
सहयोग जुटाउन अमेरिकाभरका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा हार्दिक अनुरोध गरेको छु। यसैक्रममा जनवरी ५ मा एक भर्चुअल फण्ड राइजइभेन्ट पनि आयोजना गरिएको छ। मेरिल्याण्ड राज्यको हाउस अफ डेलिगेट्सकी सभामुख एड्रिन ए जोन्सको प्रमुख आतिथ्यमा हुने उक्त इभेन्टको सफलता तपाईं हामी नेपाली–अमेरिकनको प्रतिष्ठाको विषय पनि हो। म यहाँहरू सबैलाई इभेन्टमा उपस्थित भएर विचार विमर्शमा सहभागी हुन सविनय अनुरोध गर्दछु।
यसबाट अमेरिकामा रहेका तपाईं हामी नेपालीको पक्षमा एउटा गौरवशाली इतिहासको निर्माण भयो। पहिलो कार्यकालको अधिकांश समय कोरोना कहरमा बितेपनि केही सिक्ने अवसर मिल्यो, केही गर्न सकियो। र, आज एक नेपाली–अमेरिकन डेलिगेटका रूपमा आफ्नो समुदायलाई सबैले देख्ने र अनुभव गर्ने गरी प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छु।
यो इभेन्ट मेरिल्याण्डको मात्र हैन, अमेरिकाका पचासवटै राज्यमा नेपालको पहिचान विस्तार गरिरहेका तपाईं हामी सबै नेपालीको हो। हामीले सहकार्यको साझा संस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ। एक हैन अनेक सफलताका कथाहरू लेख्न तयार हुनुपर्छ । र, ती सबैमा तपाईं हामी देखिनु पर्छ भेटिनुपर्छ।
क्यालिफोर्नियाको नेपालीलाई पीडा हुँदा भर्जिनियाको नेपालीलाई दुख्नुपर्छ। मेरिल्याण्डको नेपालीको उपलव्धीमा न्युयोर्कको नेपाली खुशी हुन सक्नुपर्छ । हामीले बिर्सनु हुँदैन, कोरोना कहरका बेला न्युयोर्कका नेपालीमा बज्रपात पर्दा टेक्सासलगायतका नेपालीले औषधि पठाएर त्यही नेपालीपनको, नेपालीमनको परिचय दिएको वास्तविकता ।
मेरिल्याण्डको यो अभियान हामी सबैको साझा अभियान हो। ह्यारी भण्डारी त तपाईं हामी सबैको निमित्त मात्र हो। यस्ता नेपाली ह्यारीहरू अमेरिकाका ५० वटै राज्यका डिस्ट्रिक्टहरूमा उभिएर नेपाली समुदायलाई टाढैबाट देख्ने र अनुभूति गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। उनीहरूलाई उभ्याउन तपाईं हामी सबैले हेस्टेमा हैंसे गर्नुपर्छ।
सगरमाथाको देशबाट आएका हामी, वुद्धजन्मेको देशबाट आएका हामी। हाम्रायी दुबै महान परिचयलाई शीरमा राखेर नेपाली अमेरिकनको गौरवशाली बिस्तारित परिचय बनाउन सक्छौं। त्यसकालागि जसले जहाँबाट जे गर्न सकिन्छ, त्यही गरौं। यही नै समयको माग हो।